Fanadihadiana ny M-HORSE Pure 2, ny fivoaran'ny smartphone feno | Androidsis
M-HORSE Pure 2 famerenana
Amin'ity indray mitoraka ity dia ho fantatsika voalohany ny kinova faharoa amin'ny Smartphone izay nisy fiatraikany tsara teo amintsika noho ny tahan'ny kalitao / vidiny tena tsara. Alohan'ny M-HORSE Pure 2, telefaona maneho amin'ny lafiny maro a ny fivoarana miohatra amin'ny teo alohany.
Raha efa tianao ny M-HORSE Pure 1 dia miandrasa mandra-pahafantaranao izay azon'ny M-HORSE Pure 2. Manome dingana ho an'ity orinasa sinoa ity izay manolo-tena hanohy hanolotra. avo lenta amin'ny vidiny ambany. Raha mbola mitady Smartphone finday lafo izay maharesy lahatra anao ianao dia mamakia hatrany.
1 M-HORSE Pure 2, fivoarana hitazomana hatrany
2 Inona no ao amin'ny boaty M-HORSE Pure 2
3 Famolavolana ny M-HORSE Pure 2
4 Taratasy data M-HORSE Pure 2
5 Fizarana lehibe ho an'ny Smartphone lehibe
6 Ny atin'ny M-HORSE Pure 2
6.1 Fakan-tsary tsara aloha fa tsy dia misy
7 Battery sy fizakan-tena
8 Mpandahateny sa mpandahateny ho an'ny feo?
9 Zava-nisongadina sy fanatsarana ny M-HORSE Pure 2
9.1 Ny tsara indrindra amin'ny M-HORSE Pure 2
9.2 Lafiny hatsaraina
M-HORSE Pure 2, fivoarana hitazomana hatrany
Talohan'ny faran'ny taona dia afaka nanadinika tsara izahay ary nilaza taminao ny M-HORSE Pure 1. Taorian'ny herinandro nampiasana azy dia nahatratra fehin-kevitra izahay, saika ny lafy tsara rehetra, tamin'ny fiheverana ny fifandanjana eo amin'ny fampisehoana sy ny vidiny. Na dia tsy maintsy nanondro zavatra vitsivitsy azo hatsaraina ihany koa izahay. Miaraka amin'ny M-HORSE Pure 2 azontsika atao ny mamakafaka ny fomba sy ohatrinona no nohatsarain'ny fitaovana ity raha oharina amin'ny kinova taloha.
Maso mitanjaka, manan-danja ny fiovana. Mikasika ny famolavolana, ny M-HORSE Pure 2 dia saika tsy misy itovizany amin'ilay maodely teo aloha. Tsy mifanitsy amin'ny safidin'ireo fitaovana fananganana koa izy ireo. Ary araka ny ho hitantsika etsy ambany, nahita ihany koa isika tao anatiny fanovana maro.
Ny fanombanana raha tsara kokoa na ratsy kokoa ny endriny dia sarotra. Rehefa miresaka momba ny tsiro isika, dia tsy afaka hifanaraka amin'ny mpampiasa rehetra. Fa raha miresaka isika fa misy ny fanatsarana amin'ny lafiny tombony dia mora kokoa ny milaza izany ny M-HORSE Pure 2 dia mampiakatra ny bara amin'ilay natolotra teo aloha.
Ny M-HORSE Pure 2 dia misy toerana ambony ambonin'ny Pure 1, ary angamba ny ankamaroan'ny eo anelanelany ihany koa. Hitanay ny fomba misy Fanatsarana ny fitadidiana RAM sy ROM. Efijery lehibe kokoa. Mpandrindra tsara indrindra. Fakan-tsary tsara indrindra. Amin'ireto antony ireto ihany no ahafantarantsika fa eo alohan'ny Smartphone iray afaka manome lahateny antsika isika; raha liana ianao izao Azonao atao ny mividy azy izao amin'ny € 105 fotsiny amin'ny fipihana eto.
Inona no ao amin'ny boaty M-HORSE Pure 2
Ao amin'ny boaty ny M-HORSE Pure 2 mahita ny singa fototra isika, miaraka amin'ny zava-baovao. Amin'ny tranga voalohany dia hitantsika fa voaaro tanteraka eo anelanelan'ny plastika ilay fitaovana. Raha vantany vao "navoaka" tamin'ny fonosany dia hitantsika ny fandresen'ny M-HORSE Pure 2 amin'ny halavirana lavitra. Na dia Smartphone amin'ny vera aza dia tsy manome ny fahatsapana ho fitaovana marefo.
Toy ny mahazatra dia ananantsika ny USB tariby, amin'ity tranga ity USB Karazana C, ho an'ny famandrihana sy famindrana angona. SY ny plug hifandray amin'ny rindrina. Eto no ahitantsika lesoka, ary izany dia tsy mandeha amin'ny plug-n'ny eropeana ny mpampitohy famandrihana. Zavatra antenainay hamaha azy ireo haingana araka izay tratra.
Mampalahelo fa indray mandeha isika dia tsy maintsy miorim-paka amin'ny telefaona finday. Toa tsy nivadika intsony ity fanapahan-kevitra ity ary tsy misy mpanamboatra tsy voamarina amin'ny fampidirana ny headphones-ny. Ho fiheverana, M-HORSE dia mampiditra ao anaty boaty a Saron'ny silipo manana kalitao tsara hiarovana ireo fitaovantsika vaovao. Ary a efijery izay tsy veromaso tamped.
Ary ny zava-baovao misy ny M-HORSE dia vokatry ny fanapaha-kevitra hanafoana ny mpampitohy mini Jack amin'ny fitaovanao. Manana isika adaptatera izay hampiasaina hampifandray ny headphones antsika amin'ny mpampitohy USB karazana C. Azontsika atao koa ny manadino ny fametahana sofina an-telefaona mandritra ny famenoana finday.
Anisan'ireo singa fototra sy mahazatra ananantsika koa fampiasana haingana sy antontan-taratasy fiantohana. Araka ny efa nolazainay, tsy fisiany malaza, ny headphones. Ary "fanomezana" ankasitrahana dia ny fonony silikao.
Famolavolana ny M-HORSE Pure 2
M-HORSE dia afaka nanolotra ireo fitaovany Pure roa miaraka amina sary sy famolavolana tena nianarana. Tamin'ny endriny voalohany dia nahasarika ny sain'ny maro ny fanamboarana ny chassis metaly vita amin'ny gloss. Tsy misy afa-tsy amin'ny loko roa, manga sy mainty. Mazava ny fitovizany amin'ny Samsung Galaxy S7 sy Samsung Galaxy S8. Ary raha ampitahaina dia nahita tsipika fifanandrifian-javatra maromaro teo anelanelan'ny iray hafa.
Ny M-HORSE Pure 2 dia nijanona teo aoriany vy ahoana ny lazany tato ho ato. Ary mitohy amin'ny onja ankehitriny kokoa miloka amin'ny vatana vita amin'ny vera voakolokolo miaraka amin'ny poloney sy famirapiratana tena tsara. Ny endrika ivelany dia tsy voamariky ny olona ary mahatonga ny fitaovana M-HORSE tena mahafinaritra ny maso.
Raha hametraka ity karazana famaranana ity dia mazava ho azy fa mora azo vaky. Maloto izy ity raha mijery azy fotsiny, ary tsy ho ela ny dian-dianay dia hanafotra ny aoriana tsara tarehy avy eo. Zavatra azontsika hialana, ankoatry ny fiarovana azy amin'ny hatairana, noho ny tranga silika ampidirin'ny M-HORSE ao anaty boaty ao amin'ny fitaovana.
Mahita teboka bebe kokoa momba ny fivoarana momba ny endrika ankoatry ny fitaovana. Raha manatrika ny toerana misy ireo singa ao ambadika, mandinika fiovana mahery vaika koa izahay. Ny famakiana an-tserasera ny flash, fakan-tsary ary mpamaky ny rantsantanana dia nidina teo amin'ny tantara. Ary izao dia mijery fomba iray, farafaharatsiny amin'ny fakan-tsary, izany mampahatsiahy antsika betsaka ny iPhone X an'ny Apple.
Eo alohan'ilay fitaovana dia miavaka be Efijery diagonaly 5,99-inch. Sakan-tsipika tafiditra ao anaty chassis "standard" amin'ny alàlan'ny fanindriana ny aloha mandra-pahatongan'ny vitsivitsy zana-kazo kely. Saika tsy misy ny faran'ny sy ny tampony, mba tsy hamelana banga ho an'ny fakantsary anoloana izay hita eo ambany.
Ao aminy Ankavanana hitanay ny bokotra hidin-trano ary on / off, ary bokotra elongated izay mampifangaro azy roa fanaraha-maso ny volume.
Ao aminy lafiny ankavia isika ihany no manana ny slot azo esorina ho an'ny karatra SIM ary avy amin'ny fahatsiarovana.
Ny tapany ambany dia misy fiasa vaovao. Ny tena lehibe dia ny ahitantsika ilay vaovao Connector USB Type C amin'ny famandrihana sy famindrana angona. Ankoatra ny fanamarihana ny tsy fisian'ny fampidirana jack mini ho an'ny headphones. Smartphone iray hafa izay manapa-kevitra ny hisafidy ny mpampifandray karazana C amin'ny fotoana iray ary hanolo ny jack headphone mahazatra.
Hitanay ny fomba amin'ny lafiny roa amin'ny mpampitohy toa mpandahateny roa izy ireo. Na dia taorian'ny fitsapana ny finday avo lenta aza izahay dia afaka nahita izany, araka izay atahorantsika, iray amin'izy ireo ihany no mpandahateny. ary vahaolana estetika ihany io hampiditra ny mikrô amin'ny faran'ny hafa.
Ny fakan-tsary mbola miorina dia eo amin'ny zoro havia ambony ao ambadiky ny fitaovana. Mampahafantatra ny mitaratra mitsivalana, iray ambonin'ilay iray hafa. Ny tselatra dia ampifandraisina eo anelanelan'ny lantiro mahazo mamorona "block" tokana ho an'ireo singa roa.
Ho an'ny mpamaky ny rantsantanana, dia hita amin'ny faritra ahazoana aina kokoa. Tafasaraka amin'ny fakantsary, ary ambany kely sy afovoany. Mora kokoa sy intuitive kokoa ny mametraka ny rantsan-tanananao amin'ny finday eny an-tananao. Ary tsy misy tahotra fa afaka mametraka ny rantsan-tànantsika amin'ny fakantsary fakantsary isika, fahombiazana. Ny toerana misy ireo singa sy ny kalitaon'ny fitaovany dia manome endrika miavaka azy.
Taratasy data M-HORSE Pure 2
modely 2 madio
efijery LCD 5.99 IPS LCD
fitehirizana 64 GB
Fakan-tsary Rear 13MP + 2MP
lafiny 75 X 156.5 X 8.3
vidiny 129.99 $
Fizarana lehibe ho an'ny Smartphone lehibe
Ny iray amin'ireo manintona ny M-HORSE Pure 2 dia ny efijery. Efa zatra mahita efijery lehibe sy lehibe kokoa izahay ary tianay izany. Smartphone iray hafa izay manolo-tena mihoatra ny 5,5 santimetatra, mihazakazaka mankany amin'izay omen'ny chassis an'ilay fitaovana azy.
Nahita olona malala-tanana izahay Efijery 5,99 inch izay mifangaro tanteraka amin'ny aloha miaraka amina visor tsy misy. ny Tontonana LCD IPS misy vahaolana feno HD 720 x 1440. Ary misy izany 269 teboka isaky ny hakitroky ny refy. Kalitaon'ny sary ho an'ny horonantsary sy herin'ny famirapiratana tsara hijerena ny efijery eny ivelany.
Miaraka amin'ny Fizarana 18: 9. Tena mety ny mijery horonan-tsary mifanaraka amin'ny habeny. Ny traikefan'ny mpampiasa handany atiny multimedia dia tena mahafa-po. Ary tsy mila manentsina ny masontsika isika mba hankafy horonan-tsary na lalao amin'ny karazany ao amin'ity Smartphone ity.
Amin'ity tranga ity, ny M-HORSE Pure 2 dia manana ny bokotra capacitive ao anatin'ny efijery mihitsy. Ary na dia priori aza dia toa mampihena ny haben'ny habentsika, dia tsy mba toy izany. Misaotra mialoha amin'ny resaka rindrambaiko, afaka misafidy na hanafina azy ireo isika na tsia rehefa milalao horonantsary amin'ny efijery feno isika. Toy izany koa no hisehoan'izy ireo eo amin'ny efijery raha manetsika ny rantsan-tanantsika isika. Zavatra tena mitovy amin'ny ataon'ny Windows taskbar rehefa namboarina hanafina azy ireo.
Miaraka amin'ny bokotra Android an'ny "multi-task", "home" ary "back", eo ankavia, hitantsika zana-tsipìka iray manondro. Amin'ny alàlan'ny fanindriana azy dia ho takona ireo bokotra mandra-pahatongantsika hampiasa azy ireo indray. Fandrosoana mialoha tsy misy fisalasalana izay mamela antsika hankafy ny haben'ny efijery malala-tanana.
Izany tokoa eo ambanin'ny efijery dia tsy misy afa-tsy ny fakantsary eo aloha izay toerana hiresahanay aminao vetivety. ny ny akaiky, ny hazavana manodidina ary ny mari-pamantarana ny hery misintona. Asa lehibe vita mba hanitarana ny habeny nefa tsy mahafoy izay singa mahasoa ny mpampiasa.
Ny atin'ny M-HORSE Pure 2
Ao amin'ny fizarana Fitaovana sy hery amin'ny fitaovana hitantsika koa a fivoarana miavaka raha oharina amin'ny Pure 1. Hery bebe kokoa, mpanamory vaovao, ary fahatsiarovana RAM sy ROM lehibe kokoa, mahatonga ny fiakaran'ny kalitao hita miharihary. Ny fahasamihafana dia miharihary amin'ny valinteny sy fitenenana lehibe kokoa.
Raha ny momba ny processeur, ny M-HORSE Pure 2 dia misy MediaTek MT6750. 1.5 GHz Octa-Core misy maritrano 64 Bit. Processor atokisan'ny marika toa ny LG amin'ny K10, X Power 2, ankoatry ny hafa. Na Huawei miaraka amin'ny Honor V9 sy Honor 6C Pro. Tsy toy ny kinova voalohany an'ny Pure izay nametraka MediaTek MT6737h.
Ny M-HORSE Pure 2 dia toa tsy ho kely hery. Manana a RAM 4GB izay atambatra amin'ny a Fahafaha-mitahiry 64GB azo itarina Tsaroanay fa ny Pure 1 dia nanomboka tamin'ny RAM 3 GB sy 32 GB ho fitehirizana. Tsy misy isalasalana, ny kinova vaovao dia manana isa ampy hankafizany fahombiazana tena tsara amin'ny toe-javatra rehetra izay nosedraina azy.
Mikasika ilay rindrambaiko dia tokony homarihina fa manana izany Android 7.0 Nougat. Ary izany dia afaka amin'ny sosona fanaingoana sarotra. Noho izany dia hanana ny fidirana amin'ny configurations sy customization rehetra omen'ny Android madio ho antsika isika. Zavatra tianay sy ankafizinay.
Ao amin'ny menio amin'ity M-HORSE Pure 2 ity dia nahita zavatra iray manaitra antsika. Na dia mety heverina ho bibikely ho an'ny sasany aza izy io dia ho voavaha mora amin'ny fanavaozana ho avy. Ary izany dia ao anaty menio, amin'ny configurations na setting sasany dia hitantsika fa miseho amin'ny teny Anglisy ilay lahatsoratra. Na koa amin'ny teny espaniola nadika ratsy izay hafahafa ny famakiana.
Matoky izahay fa ny ekipa M-HORSE dia ho afaka mahita io lesoka kely io amin'ny lozisialy. Ary tsy ho ela isika dia hanana ny lahatsoratra rehetra amin'ny menio fikirakirana amin'ny fiteny voafantina. Fahombiazana kely izay horaisin'izy ireo tsy ho ela ka ny fiasa tokony hatao dia tsy rahon'ny antony ivelany.
Saripika tena misy ao amin'ny M-HORSE Pure 2
Miverina indray isika izao finday sinoa tonga hanafoana ilay fitenenana hoe ratsy ny fakantsariny. Smartphone iray izay fakan-tsary indroa manome fanapahan-kevitra 13 Megapixels sy 2 Megapixels, avy. Miaraka amin'ny Sensor Snoy IMX135 Exmor RS. Sivana iray izay tsy vaovao, fa izay an-tampon'ilay faritra toa ny Samsung Galaxy Note 3, ankoatry ny hafa, dia natoky.
Ny toerana misy ny fakantsary ao ambadiky ny fitaovana, ary koa ny fisehoany ara-batana mampatsiahy betsaka antsika momba ny iPhone X. Ny fakantsary roa dia mametraka ny lantirany eo ankavia ambony, ary manao izany mitsangana, ny iray ambonin'ilay iray hafa. Mametraka ny flash hatrany anelanelan'ny roa. Araka ny lazaintsika, amin'ny endrika iPhone X madio indrindra.
Ny famolavolana ny lamosin'ny fitaovana dia be pitsiny. ny famaranana vera nohosorana vera miaraka amin'ny mpamaky ny rantsantanana tafiditra tanteraka ao anaty vatana. Ary ny toerana fakan-tsary aoriana atolory ny fitaovana a tena fijery «premium». Zavatra tsy azonay lazaina momba ny toerana misy ny fakantsary eo aloha. Indray, noho ny heverina fa olan'ny habakabaka dia mametraka ny mpamokatra ny fakan-tsary eo aloha eo ambanin'ny tontonana eo aloha.
Tamin'ny fanadihadihana teo aloha dia efa nasehonay ny olana fa ny fanapahan-kevitra hametraka ny fakantsary selfie amin'io tranonkala io dia manome ny mpampiasa. Mora dia mora ny manarona azy amin'ny tanana. Ary sarotra ny maka sary amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra eo amin'ny efijery nefa tsy manarona ny solomaso amin'ny lafiny iray. Tianay ny efijery lehibe, saingy vao mainka aza raha tsy misy fiantraikany amin'ny fametrahana voajanahary ireo singa ao aminy.
Ho an'ny fakan-tsary, raha milaza fa tianay ilay izy, dia Tena feno. Manolotra toe-javatra maromaro sy safidy fitifirana izy io. Izany dia autofocus. Tifitra variraraka na mitohy, mety amin'ny sary mihetsika, fanatanjahan-tena, ankizy. Anisan'ireo toe-javatra mandeha ho azy, ny iray amin'ireo fanonerana ho an'ny sary misy loko maranitra sy mazava.
Mila manao a manonona manokana ny isan'ny sivana misy fandidiana iray-mikasika. Sivana izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana fakana sary, fa tsy aorian'ny fakana sary. Azontsika atao ny mifidy izay tsara kokoa alohan'ny hitifirana. Negative, sepia, solaitrabe, posterize, dia ny sasany amin'ireo efatra ambin'ny folo izay afaka manapa-kevitra isika.
Mikasika ny maody fakana sary, misaotra ny fakantsary roa manana "mode portrait" malaza izahay. Ary miaraka amin'ny iray hafa izay mitovy be aminy ary koa manjary manjavozavo kely amin'ilay ampahany manodidina ny afovoan'ny sary mba hanasongadinana azy bebe kokoa. Lazao fa nahita izany izahay ny shutter mety ho lava kokoa noho ny mahazatra ny fanokafana sy ny fanidiana mampiasa ireto maody ireto. Ratsy indrindra, somary hafahafa ny anaran'ireo fomba fakana sary ireo, angamba vokatry ny fandikan-teny diso.
Amin'ny ankapobeny, ny fihetsika amin'ny fakantsary dia tsara. ny shutter amin'ny toe-javatra mahazatra dia miasa haingana ary ny autofocus dia mandaitra ary eo noho eo. Tao anatin'ireo fitsapana natao dia afaka nahazo valiny tsara izahay, indrindra fa ny fakana sary miaraka amin'ny hazavana voajanahary tsara. Ny loko mazava sy tena misy, ny famaritana tsara ary ny famahana dia mahatonga ity fakantsary fakan-tsarin'i Sony ity hijerena ny M-HORSE Pure 2.
Fakan-tsary tsara aloha fa tsy dia misy
Ny fakan-tsary any aoriana an'ny M-HORSE Pure 2 dia manasongadina a 8 sensor an'ny vahaolana megapixel. Fanapahana mihoatra ny mendrika ho an'ny fakantsary selfie. Na dia mampalahelo aza, ny kalitao azontsika raisina dia voaloton'ny a toerana mahatsiravina. Tsy manana flash eo alohany isika, zavatra nanapa-kevitra ny hifidy ny orinasa hafa.
Araka ny hitantsika dia miankina amin'ny par. Mihoatra lavitra noho ny azontsika antenaina amin'ny finday avo lenta sinoa mivezivezy amin'ity sokajy vidiny ity. Tsy tianay mihitsy ny toerana misy ny fakantsary eo aloha (indray mandeha indray), fa amin'ny ankapobeny ny fijerin'ny fakantsary M-HORSE Pure 2 dia afaka heverina ho ratsy kely kokoa.
Battery sy fizakan-tena
algo hitantsika izany miova izy io amin'ny andian-tsarimihetsika farany farany dia misy ifandraisany ny bateria. Toa nanapa-kevitra ireo mpanamboatra ny hihaino ny sarambabem-bahoaka. Ary miloka amin'ny fampiharana batterie izy ireo fahaiza-manao lehibe kokoa. Na dia izany aza tsy mitarika fahaleovan-tena mihabe foana. Samy izy na zava-dehibe kokoa mba hahazoana fanatsarana tsara eo amin'ireo singa ny fitaovana iray ka ny fanaraha-maso ny fandaniana angovo dia manampy amin'ny fanitarana ny fizakan-tena.
Vao haingana izahay no nanandramana fitaovana misy bateria goavambe izay tsy manome ny fizakantena tadiavin'izy ireo avy eo. Ary ny zavatra ratsy indrindra dia tsy ny fizakantenan-dry zareo manao doka indraindray tsy mahatratra antsasaky akory. SAINGY Miverina dingana lehibe iray isika, mahita ny tenantsika amin'ireo finday avo lenta mavesatra. Ny ankamaroantsika dia tsy mila finday avo lenta misy bateria lehibe tsy maharitra intsony.
Ny zavatra mahaliana dia ny mahita ny fandanjalanjana tonga lafatra. Ary miasa ny orinasa. Ny M-HORSE Pure 2 efa akaiky ho tonga eo. Miorina amin'ny zava-misy mba hanohanana ny fandaniana angovo ateraky ny efijery efa ho 6 santimetatra. Ilaina ny fametrahana fitaovana miaraka amina fiampangana ampy hahafahana maharitra "velona" mandritra ny iray andro iray farafahakeliny. Ary izany dia nihoatra ny zava-bita.
Miaraka amin'ny 3.800 mAh mahazaka, batterie Li-Polymer, dia mahavita manao ny M-HORSE hahatratra ny faran'ny andro mavitrika tsy misy olana. Amin'ny fampiasana isan'andro ny fitaovana izay ampidirina ny fotoana mety amin'ny Netflix sy Spotify. Ho fanampin'ny fampiasana tambajotra sosialy, kaonty fakantsary sy mailaka ankoatry ny hafa. Ny M-HORSE dia afaka "mandeha matory" na dia misy fihenan'ny bateria aza manodidina ny 25%.
Voaporofo fa na dia misy 3.800 mAh aza ny M-HORSE Pure 2 dia tsy ny Smartphone izay manome ny sarany bateria betsaka indrindra. Ny valiny amin'ny lafiny fampisehoana sy fahaleovan-tena dia tena tsara. Izahay dia nandramana ireo fantsona izay amin'ny taratasy dia manana fahaiza-mavesatra bebe kokoa izay tsy nanome valiny toy izany.
Mpandahateny sa mpandahateny ho an'ny feo?
Indray mandeha indray, ary misy maro, tsy maintsy miresaka momba ny Smartphone miaraka isika vokarin'ny mpitovo tokana. Ny feo "Mono" dia napetraka mafy amin'ny "Stereo" amin'ny vokatra ivelany amin'ny finday avo lenta. Raharaha habaka, filàna na lamaody.
Na dia vao jerena aza, mety hiseho fa ny M-HORSE Pure 2 dia manana mpandahateny roa eo amin'ny farany ambany. Hatramin'ny lafiny roa amin'ny mpampitohy fampandoavam-bola dia manana perforations mitovy isika, toa ho an'ireo mpandahateny. Fa ny marina dia amin'ny lafiny iray ihany misy fanamafisam-peo. Ary ny ambiny Izany dia noho ny olana estetika noho ny feo. Zavatra izay azontsika jerena mora foana amin'ny alàlan'ny fandrakofana ny iray amin'ireo sisiny rehefa milalao hira isika.
Araka ny efa noresahintsika tamin'ny fotoana maromaro, ny fivoahan'ny feo ivelany an'ny finday avo lenta dia zavatra tsy nivoatra nandritra ny taona maro. Tsy fantatsika raha hohadinoina izany amin'ny farany. Na ho avy ny orinasa matanjaka sasany izay manolo-tena ho azy ary ny ambiny dia hanaraka ny diany. Amin'izao fotoana izao dia mila milamina amin'ny fampiasana headphone na mpandahateny fanampiny isika mba hahafahantsika mihaino mozika amin'ny toe-javatra tsara.
Raha miresaka headphones, izay tsy ampidirin'ny M-HORSE Pure 2 ao anaty boaty, mila adaptatera isika mba hahafahana mampifandray iray amin'ny mpampitohy Jack amin'ny finday. Raisina an-tsaina izany Raha ampidirina hitandrina ny fitaovana, dia tsy hanana safidy hanao izany isika. Fivoarana miandalana? Tsy dia mieritreritra an'izany aho.
Tsy tianay koa ny tsy ahafahana manana tuner radio fm. Mazava fa manana safidy maro ahafahana mihaino radio isika anio. Fa miankina amin'ny fihinanana angona finday na famantarana Wi-Fi tsara foana. Mety ho sakana tsy ahafahana mampifandray headphones izay tariby dia miasa ho antena.
Zava-nisongadina sy fanatsarana ny M-HORSE Pure 2
Voalohany, satria miatrika ny andiany faharoa an'ny Smartphone izahay dia tsy azo ihodivirana ny fanaovana fampitahana. Ary tsy maintsy milaza an'izany isika ny evolisiona dia azo tsapain-tanana amin'ny maodely vaovao raha oharina amin'ilay teo aloha saika amin'ny lafiny rehetra. Avy amin'ny volavola, amin'ny alàlan'ny fahatsiarovana RAM sy ROM, hatramin'ny famahana ny fakantsarinao sy ny haben'ny efijeryo.
Ny tsara indrindra amin'ny M-HORSE Pure 2
Izany dia nilaza, tena tianay ny famolavolana. Io aoriana, an'iza fitaovana, endrika fakan-tsary sy toerana misy ireo singa dia mampahatsiahy antsika betsaka ny iPhone X. Ny vera voakilasy voafantina noho ny fananganana azy dia manolotra a sary miavaka sy tena miavaka.
Ny efijeryo, tontonana goavambe misy diagonal 5,99-inch miaraka amin'ny famaha Full HD io dia iray amin'ireo teboka matanjaka indrindra. Tena mahazo aina izy noho ny fampidirana tonga lafatra ao amin'ny vatana izay tsy lehibe noho ny ambiny. tratra amin'ny vidin'ny fanenanana hatramin'ny farany ny visor.
Fakan-tsary, samy ny aoriana aoriana misy dual sensor 13MP + 2MP, ary ny fitarika ny 8 mpx. Kalitaon'ny sary tsara, vahaolana tsara ary fampiharana tsara ho an'ny sary izay manome antsika safidy sy safidy marobe.
Tsy maintsy manondro zavatra ratsy isika tsy fisian'ny LED fampandrenesana. Angamba tsy ny mpampiasa rehetra no mieritreritra izany. Ary angamba satria tsy nanam-potoana hanandramana azy ireo aho. Tena mety ny mahafantatra izay karazana fampandrenesana ananantsika amin'ny telefaona amin'ny alàlan'ny fijerena ny lokon'ny jiro fotsiny.
Elaela izay no tsy nahitanay a menio buggy fiteny. Ary izany dia amin'ny fomba roa samy hafa. Hitanay ny fisehon'ny menio Android sasany izay miseho mivantana amin'ny teny Anglisy tsy misy fandikan-teny Espaniola. Ary koa fidirana menio hafa miaraka amin'i fandikan-teny mamela betsaka ny faniriana na tsy takatra izy ireo.
Ilay mpampitohy USB-C. Tsy fahombiazana ho azy ny fampidirana ilay mpampitohy fiampangana vaovao. Mifanohitra amin'izany no izy fa heverina ho fandrosoana. Ny olana dia rahoviana Mandritra izany fotoana izany dia tapaka ny hevitra hamafana ny mpampita headphone jack. Tsy ho afaka hampiasa headphones ianao raha tsy misy adaptatera, na mihaino mozika miaraka amin'izy ireo mandritra ny telefaona finday.
Ya Izahay dia tsy afaka hampiasa ny habetsaky ny tariby USB izay anananao ao an-trano. Farafaharatsiny mba tsy ho afaka manana adaptatera ianao. Izany miaraka amin'ny adaptatera ho an'ny headphone dia manery antsika hitondra kojakoja roa fanampiny izay tsy nilaina teo aloha.
tsy fisian'ny LED fampandrenesana
fanesorana ny seranan-tsambo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » M-HORSE Pure 2 famerenana
Namoaka voalohany ny sary an'ny Huawei P20 Lite
Unboxing Xiaomi Mi 6, ary ny fahatsapana voalohany!